Ungasusa kanjani upende kusuka ku-jeans?
Wonke umuntu wayebhekene nezindwangu ezembathweni. Bathukuthela ngokukhethekile abesifazane, okufanele bawathathe. Futhi uma le ndawo isabalwa njengenzima ukukhipha, khona-ke lokhu kuyingozi. Ezingxenyeni ezinjalo ezimbi yizindawo ezenziwe ngopende. Zingavela ngaphansi kwanoma yiziphi izimo: ngesikhathi sokudweba okuthile noma esimweni esinjalo lapho uhlala ebhentshini elidwetshiwe. Yebo, izingane, ezinenkinga ezinjalo azikwazi ukugwema nhlobo. Ngakho ulahla kanjani izindawo ezinjalo "ezimibalabala," ukususa kanjani upende kusuka ku-jeans yakho? Futhi kungenzeka yini?
Mhlawumbe! Kodwa kulokhu, isivinini sibalulekile. Ungafaki ngokushesha izingubo ezingcolile ebhasikisini lokuhlanza. Uma isikhathi eside esembathweni sihlala, kuyakuba nzima ukuyiqeda. Uma sekudlulile amahora angaphezu kwamathathu kusukela ukubonakala kwebala, kuyokwazi ukubhekana nayo nhlobo ngosizo lwesepha evamile lomkhaya noma isilahla. Ukuyinkimbinkimbi ye-excretion kungase kuxhomeke nohlobo lwepeyinti elinenhlanhla ngokwanele ukuze uthole izingubo zakho. Isibonelo, amabala avela kumanzi we-watercolors noma i-gouache angasuswa kalula, ngoba ahlakazeka emanzini. Kulesi simo, akudingeki ucabange isikhathi esingakanani sokususa upende kusuka ku-jeans. Ukuze wenze lokhu, vele ugeze ubala ngokufaka ngaphansi komfula wamanzi abandayo, noma uvele ugcobe izingubo emanzini abandayo, ungeze imfucuza lapho , futhi ngemva kokuwageza nge-detergent.
Ukupenda kwamafutha kunzima kakhulu ukuphuma. Kodwa ungakwazi ukukuvimbela. Isibonelo, uma usebenza nge- tempera (upende owenziwe ukudweba ubuciko bomdaka), ke ngesikhathi sekulungiselela, engeza ingxube, ngaphezu kwazo zonke ezinye izithako, isobho elincane elincane. Lokhu kuzokwenza inqubo yokukhipha ibala elilula, kuyoba insipho eyanele kanye ne-jet yamanzi abandayo.
Uma konke ukungcola okufanayo kungenakugwema, ngabe ukususa kanjani upende kusuka ku-jeans kulokhu? Ukuze ususe kuzozodinga ukuthuthumela. Sebenzisa i-turpentine, i-parafini noma i-acetone. Kubalulekile ukufaka noma yikuphi yalezi zimali kwi-swab yesikotini bese ususa ibala endaweni yokujikeleza.
Umbuzo othi "ukususa kanjani upende kusuka ku-jeans" unempendulo eyodwa. Ukupenda kwamafutha kungasuswa futhi ngosizo lwephesolini elicwengile (ithengiswa cishe kunoma yisiphi isitolo se-hardware). Isimiso sokusetshenziswa sinjalo: moisten disc i-cotton bese uqhuba ibala. Ungazami ukusebenzisa uphethiloli ovamile, kungenza ngcono isimo futhi kubambe iqhaza ekubukeni kwamabala amasha.
Uma ibala lilokhu linyanyekile, khona-ke kulesi simo kanjani ukuhlanza i-jeans kusuka kwipende? Kumele uqale ummese noma ijaji, uzama ukulimaza isendwangu, ususe i-crust eyakhiwe. Ukuqeda umbala ngendlela efanayo njengoba kuchaziwe ngenhla. Kodwa kulokhu, kufanele uqale wenze upende luqale ukuqothula, bese ususa ngokweqile, bese ususa kuphela ibala. Yilungele le nqubo ukuthi ibambezeleke. Ngemuva kokuqedela, phatha indawo ehlanzekile ngesisombululo esinamandla soda.
Ngemuva kwenqubo yokukhipha izitshalo, kufanele ugeze njalo izingubo ngamanzi asebenzayo bese uwafaka emoyeni ovulekile ukuze ususe iphunga elivela kwi-solvent.
Lokhu akuzona zonke izindlela zokuhlanza upende kusuka kwi-jeans. Kodwa zama, kungazelelwe omunye wabo uzokusiza ngempela?
Thenga "Rendezvous" - izicathulo ozinikezele
Chic waseParis labangela ukuqala komkhakha njengoba isitayela yokugqoka. isitayela Umhlahlandlela
Indlela ukugqoka ibhulukwe zabesifazane zidabukile
Njengoba ngikuBaba Isitolo Wabantu Piata.ru wahamba, futhi kungani manje akudingekile ukuba aye kwenye
Umuthi 'Legalon'. Yokusetshenziswa
PVC amapayipi amapayipi: usayizi Ukukhetha imithetho
Kungani lakhulisiwe zamanzi ngaphansi ingalo, nendlela abaziphatha ngayo?
Ivan Dmitriev, imbongi-fabulist futhi sikahulumeni
Indlela asuse umthwalo kusukela efulethini ngemva sokukhokhwa mortgage?
Pasta Bolognese noma spaghetti nge inyama
Ukuphakama izitebhisi: GOST. Ukubalwa izinyathelo usayizi kanye emthambekeni indiza ka izitebhisi
Isibani sikagesi: isimiso ukusebenza futhi izici
Lily Izinambuzane nokulawula kwabo